အသဈသော ပြျောရှငျစရာ၊ ရငျခုနျစရာ၊ တိုးတကျအောငျမွငျရာမြားကို တငျဆကျပေးထားတဲ့ Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုနဲ့ မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Byoh Lifestyle Web Portal www.byoh.com.mm (သို့) App မှတဆငျ့ ခတျေနဲ့အညီရငျပေါငျတနျးနိုငျဖို့၊ နညျးပညာခတျေကွီးထဲမှာ သူမြားတှရေဲ့နောကျမှာ မကနျြရဈစဖေို့ အစီအစဉျကောငျးတှကေို နစေ့ဉျတငျဆကျပေးနတော ဖွဈပါတယျ။ စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးတဲ့ ကဏ်ဍပေါငျးမြားစှာပါဝငျပွီး ကွညျ့ရှုစရာအစီအစဉျအသဈတှနေဲ့ ဖတျရှုစရာ ဆောငျးပါးအသဈတှကေို နစေ့ဉျတငျဆကျပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ တဈရကျလြှငျ ၉၉ ကပျြသာ ကသြငျ့ပါမညျ။အသေးစိတျ သိလိုသညျမြားအတှကျ 106 ကို ဆကျသှယျပါ။
တဈရကျလြှငျ ၉၉ ကပျြသာ
Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှု
Byoh Lifestyle Application ကို Google Play Store မှာ Download လုပျပွီး ရယူနိုငျသလို https://lotaya.mpt.com.mm/byoh.apk မှာလညျး Download လုပျပွီး ရယူနိုငျပါတယျ။
www.byoh.com.mm မှာ ဝနျဆောငျမှုရယူပွီး ကိုယျတိုငျ အောငျမွငျတိုးတကျစဖေို့၊ ကနျြးမာထကျမွကျစဖေို့၊ ဖကျရှငျကလြှပစဖေို့၊ တကျကွှပြျောရှငျစဖေို့၊ ဗဟုသုတတှေ ကွှယျဝစဖေို့၊ ခတျေနဲ့အညီရငျပေါငျတနျးနိုငျဖို့၊ လူနမှေုဘဝတှေ မွငျ့တကျစဖေို့၊ နညျးပညာခတျေကွီးထဲမှာ သူမြားတှရေဲ့နောကျမှာ မကနျြရဈစဖေို့ Byoh Lifestyle က နစေ့ဉျတငျဆကျပေးနတေဲ့ အစီအစဉျကောငျးတှကေို တဈနရောတညျးမှာ ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ Byoh Lifestyle Application ကို iOS Device တှမှော အသုံးပွုလို့မရနိုငျသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ iOS Device အသုံးပွုသူတှအေနနေဲ့ www.byoh.com.mm မှတဆငျ့ Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုကို အသုံးပွုပွီး နစေ့ဉျတငျဆကျပေးနတေဲ့ အစီအစဉျကောငျးတှကေို ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
“ဗြို့ မှာ ငှကေပျြ ၁သနျးတနျ ဖုနျးဘေ နှငျ့ Samsung A30 မြားစှာရယူပါ” ကံစမျးမဲအစီအစဉျ
၁။ Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုဆိုတာ ဘယျလိုဝနျဆောငျမှုမြိုးပါလဲ။
Byoh Lifestyle ဆိုတာက လူငယျလူရှယျတို့ အောငျမွငျတိုးတကျစဖေို့၊ ကနျြးမာထကျမွကျစဖေို့၊ ဖကျရှငျကြ လှပစဖေို့၊ တကျကွှပြျောရှငျစဖေို့၊ ဗဟုသုတတှေ ကွှယျဝစဖေို့၊ ခတျေနဲ့အညီရငျ ပေါငျတနျးနိုငျဖို့၊ လူနမှေုဘဝတှေ မွငျ့တကျစဖေို့၊ နညျးပညာခတျေကွီးထဲမှာ သူမြားတှရေဲ့နောကျမှာ မကနျြရဈစဖေို့ အစီအစဉျ ကောငျးတှကေို နစေ့ဉျတငျဆကျပေးနတေဲ့ Application နဲ့ Web Portal ဝနျဆောငျမှု ဖွဈပါတယျ။ စိတျဝငျစားဖှယျ ကောငျးတဲ့ ကဏ်ဍပေါငျးမြားစှာပါဝငျပွီး ကွညျ့ရှုစရာ အစီအစဉျအသဈတှနေဲ့ ဖတျရှုစရာ ဆောငျးပါး အသဈတှကေို နစေ့ဉျတငျဆကျပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
၂။ ဝနျဆောငျမှုရယူမယျဆိုရငျ ဝနျဆောငျခ ဘယျလောကျကသြငျ့ပါမလဲ။
ကွညျ့ရှုစရာ၊ ဖတျရှုစရာ ကဏ်ဍပေါငျးမြားစှာ တငျဆကျပေးနတေဲ့ Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုကို အသုံးပွုမယျဆိုရငျ နစေ့ဉျကွေး ၉၉ ကပျြ ကသြငျ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျကွေး ၉၉ ကပျြပေးဆောငျ ပွီးပွီ ဆိုရငျတော့ Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုက နစေ့ဉျတငျဆကျပေးနတေဲ့ အစီအစဉျကောငျးတှကေို ကွညျ့ရှု ခံစားနိုငျပွီ ဖွဈပါတယျ။
၃။ Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုကို ဘယျလိုရယူရပါမလဲ။
၄။ “ဗြို့ မှာ ငှကေပျြ ၁သနျးတနျ ဖုနျးဘေ နှငျ့ Samsung A30 မြားစှာရယူပါ” ကံစမျးမဲအစီအစဉျ ဆိုတာ ဘယျလိုအစီအစဉျမြိုးပါလဲ။
“ဗြို့ မှာ ငှကေပျြ ၁သနျးတနျ ဖုနျးဘေ နှငျ့ Samsung A30 မြားစှာရယူပါ” ကံစမျးမဲအစီအစဉျဆိုတာ Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုက ကွီးမှုးပွီး ၂၇.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၅.၁၂.၂၀၁၉ ရကျအထိ ပွုလုပျကငျြးပသှားမယျ့ မိမိအတှကျ ဗဟုသုတ ကဏ်ဍ အစုံအလငျကို တဈနရောထဲမှာ ကွညျ့ရှူ့ခံစားရငျး ငှကေပျြ ၁သနျးတနျ ဖုနျးဘေ နှငျ့ Samsung A30 ဆု တှေ ကံထူး နိုငျမယျ့ ကံစမျးမဲ အစီအစဉျ တဈခု ဖွဈပါတယျ။
၅။ “ဗြို့ မှာ ငှကေပျြ ၁သနျးတနျ ဖုနျးဘေ နှငျ့ Samsung A30 မြားစှာရယူပါ” ကံစမျးမဲအစီအစဉျမှာ ပါဝငျခငျြတယျဆိုရငျ ဘယျလိုပွုလုပျရပါမလဲ။
“ဗြို့ မှာ ငှကေပျြ ၁သနျးတနျ ဖုနျးဘေ နှငျ့ Samsung A30 မြားစှာရယူပါ” ကံစမျးမဲ အစီအစဉျမှာ ပါဝငျခငျြတယျ ဆိုရငျ ကံစမျးမဲ ကာလအတှငျး Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုကို ရယူထားရပါမယျ။ 8637 ကို ON လို့ ပို့ပွီး ဝနျဆောငျမှုကို ရယူနိုငျပါတယျ။9လို့ ထပျပို့ရနျ မမဖေို့လိုပါတယျ။
၆။ Byoh Lifestyle Application ကို ဘယျလိုရယူနိုငျပါမလဲ။
၇။ Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုကို Website မှာ ရနိုငျပါသလား။
၈။ ကံထူးရှငျတှကေို ဘယျလိုရှေးခယျြမှာပါလဲ။
“ဗြို့ မှာ ငှကေပျြ ၁သနျးတနျ ဖုနျးဘေ နှငျ့ Samsung A30 မြားစှာရယူပါ” ကံစမျးမဲ ကာလအတှငျး Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှုကို ရယူ ထားသူမြားထဲမှာ ငှကေပျြ ၁ သနျးတနျ MPT ဖုနျးဘလျေ ကံထူးရှငျ ၃ ဦး နှငျ့ Samsung A30 ကံထူးရှငျ6ဦး တို့ကို မဲနှိုကျရှေးခယျြပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
မှတျခကျြ။ ။ ကံထူးရှငျရှေးခယျြရာတှငျ ကံစမျးမဲလကျဆောငျတဈခုခငျြးစီအတှကျ အရံအနနေဲ့ကံထူးရှငျ နောကျတဈဦးစီကိုပါ မဲနှိုကျရှေးခယျြထားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပထမဦးဆုံးရှေးခယျြထားတဲ့ မူရငျးကံထူးရှငျထံသို့ မဲနှိုကျရှေးခယျြပွီးနောကျ တဈရကျအတှငျး ဖုနျးဖွငျ့ဆကျသှယျအကွောငျးကွားပေးမှာဖွဈကာ အလုပျလုပျရကျ သုံးရကျအတှငျး အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ဆကျသှယျလို့မရခဲ့ပါက အရံအဖွဈ မဲနှိုကျရှေးခယျြထားတဲ့ ကံထူးရှငျကိုသာ ဆုမဲမြား၏ ကံထူးရှငျအဖွဈ အတညျပွုသတျမှတျပွီး ဆုခြီးမွှငျ့ပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
၉။ ကံထူးရှငျတှကေို ဘယျလိုဆုလကျဆောငျတှေ ခြီးမွှငျ့ပေးသှားမှာပါလဲ။
မဲပေါကျတဲ့ ကံထူးရှငျတှကေို ငှကေပျြ ၁သနျးတနျ MPT ဖုနျးဘလျေ ၃ ဆု နဲ့ Samsung A30 ၆ ဆု တို့ကို အသီးသီး ခြီးမွှငျ့ပေးအပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၀။ ဆုမြား ကို ဘယျမှာ လာရောကျထုတျယူရပါမလဲ။
ငှကေပျြ ၁သနျးတနျ MPT ဖုနျးဘလျေ နှငျ့ Samsung A30 ဆုတှကေို Byoh Lifestyle ဝနျဆောငျမှု (eTrade Myanmar Co., Ltd.) ရုံးခြုပျမှာ သတျမှတျထား သောရကျတှငျ လာရောကျထုတျယူရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၁။ ကံထူးရှငျမြားစာရငျးကို ဘယျမှာသှားကွညျ့နိုငျပါမလဲ။
ကံထူးရှငျမြား စာရငျးကို ကံထူးရှငျမြားမဲနှိုကျ ရှေးခယျြအပွီး နောကျဆယျရကျ အကွာမှာ Byoh Lifestyle Facebook Page မှာ ကွညော ပေးထားမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၂။ ကံထူးရှငျမြားထံ ဘယျလိုအကွောငျးကွားပေးမှာပါလဲ။
ကံထူးရှငျမြားထံကို ဖုနျးဖွငျ့တိုကျရိုကျဆကျသှယျအကွောငျးကွားပေးမှာဖွဈသလို MPT Facebook Page နဲ့ Byoh Lifestyle Facebook Page တို့မှာလညျး Post တငျပွီး ကွညောပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
1. What kind of service is Byoh Lifestyle?
Byoh Lifestyle isaLifestyle Application and Website service with great contents. It includes rich contents for youths (for both men and women) and coversawide range of topics such as that which relates to Health, Beauty, Fashion, Entertainment, Knowledge, Personal Development, Technology etc. Contents will be in the forms of Video, Photo, Text and Audio. Byoh Lifestyle will be presented new contents daily. You can use Byoh Lifestyle service easily via internet connected devices such as Smartphones and Tablets.
2. Where can I get Byoh Lifestyle Application?
You can download Byoh Lifestyle Application via Google Playstore or https://lotaya.mpt.com.mm/byoh.apk
3. Can I use Byoh Lifestyle service via website?
Yes, you can use via www.byoh.com.mm
Please send SMS ON to 8637. Then, send SMS9again to 8637.
5. On which devices Byoh Lifestyle service can be used?
Byoh Lifestyle service can be used on internet connected devices such as Android Smartphones (Above Android Version 4.1), iPhone, iPad and Tablet.
6. Can I use Byoh Lifestyle Application on iOS devices?
You cannot use Byoh Lifestyle Application on iOS devices currently. But you can use Byoh Lifestyle service on Byoh Lifestyle website www.byoh.com.mm
7. How much does it cost to use Byoh Lifestyle service?
It will cost only 99 Ks/ Day to subscribe Byoh Lifestyle service. After subscription, you can start watching video contents and reading article contents in Byoh Lifestyle service.
You can pay for service fee via MPT phone bill. If you areaMPT prepaid user, we will deduct service fee from your prepaid phone bill. If you areaMPT post-paid user, MPT will calculate and collect service fee when you pay for your phone bill.
9. How do I pay for service fee?
We will charge service fee from your bill of registered phone number that you submitted to use Byoh Lifestyle service. If you areaMPT post-paid user, MPT will calculate and collect service fee when you pay for your phone bill.
10. Does it cost further internet charges if I watch movies?
If you stream video contents on your device via device’s internet data directly, it will cost further for internet charges. If you watch video contents via Wifi, it will not cost further internet data charges.
11. Can I use Byoh Lifestyle Service with Wifi?
12. Can I use Byoh Lifestyle service without registration?
13. Can I watch video contents and read article contents without paying daily subscription fee?
You need to pay subscription fee to use Byoh Lifestyle service.
14. How do I unsubscribe Byoh Lifestyle Service?
Please send OFF to 8637. (OR) Please click unsubscribe button in Byoh Lifestyle Application or Byoh Lifestyle website.
15. Can I download video contents in Byoh Lifestyle service?
16. On how many devices can I use Byoh Lifestyle service simultaneously?
One account can be used on only one device. If you use your Byoh Lifestyle account on another device, account from old device will be removed.
17. Can I use Byoh Lifestyle service from abroad?
Currently, you cannot use it from abroad yet.
18. Where can I use Byoh Lifestyle service?
Currently, you can use Byoh Lifestyle service only in Myanmar.
19. Can I choose the resolution of videos while watching?
Yes, you can. You can choose the resolution of videos in 240p, 360p, 480p, 720p or 1080p as your preference.
20. How do I makeacontact to Byoh Lifestyle service?
Please call 106 (OR) 012305273 within 24 hours. You can also enquiry to Byoh Lifestyle Facebook Page messenger witin 24 hours. Byoh Lifestyle is always ready for you.
“Win One Million MPT Top-up and Samsung A30 at Byoh Lifestyle”
1. What kind of service is Byoh Lifestyle service?
2. How much does it cost to subscribe?
4. What kind of Lucky Draw Promotion is “Win One Million MPT Top-up and Samsung A30 at Byoh Lifestyle”?
“Win One Million MPT Top-up and Samsung A30 at Byoh Lifestyle” isaLucky Draw Promotion organized by Byoh Lifestyle service and it will be held from 27.9.2019 to 25.12.2019. Participants of this promotion will haveachance to win One Million MPT Top-up card and Samsung A30 by watching great contents about Health, Beauty, Fashion, Entertainment, Knowledge etc as their preferences.
5. How do I participate in the Lucky Draw Promotion?
To participate in the Lucky Draw Promotion, you have to subscribe Byoh Lifestyle service within promotion period. Please send SMS ON to 8637 to beasubscriber. Please do not forget to send again 9.
6. Where can I get Byoh Lifestyle Application?
You can download Byoh Lifestyle Application via Google Play store or https://lotaya.mpt.com.mm/byoh.apk
7. Can I use Byoh Lifestyle service via website?
8. How will you select and choose Samsung Galaxy Note 10 Plus winners?
We will do our random selections and choose3winners for one Million MPT Top up card,6winners Samsung A30 from the subscribers who subscribe Byoh Lifestyle service within promotion period of “Win One Million MPT Top-up and Samsung A30 at Byoh Lifestyle”.
Remark: We will also select one backup winner for each one Million MPT Top-up card and Samsung A30. If we can contact with the very first selected one Million MPT Top-up card and Samsung A30 Winner within three working days after winner selection, he or she will be awarded One Million MPT Top-up Card. Else, the selected backup winner will be automatically awarded the One Million MPT Top-up Card.
9. What kinds of Prizes will be awarded to winners?
One Million MPT Top up Card x3Winners
Samsung A30 x6Winners
10. Where do winners take out the prizes?
The Winners need to take out the prizes at Byoh Lifestyle Service (eTrade Myanmar Co., Ltd.) head office on fixed dates.
11. Where can I find the Winners list?
We will post the One Million MPT Top-up cards and Samsung A30 winners list on Byoh Lifestyle Facebook Page 10 working day after winner selection.
12. How will you notify the winners?
One Million MPT Top-up Cards and Samsung A30 winners will be informed directly via phone and we will also post the winners list on MPT Facebook Page and Byoh Lifestyle Facebook Page.
Terms and Condition of Byoh Lifestyle
Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူများ လိုက်နာရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Byoh Lifestyle မှ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုအနေဖြင့် ဤ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးစွဲသူများထံ ကြိုတင်အသိပေး၍ဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်အသိမပေးဘဲဖြစ်စေ လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း (သို့မဟုတ်) ရပ်ဆိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဤအတွက်လည်း Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုနှင့် MPT တို့တွင် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ဤ၀န်ဆောင်မှုကို မှတ်ပုံတင်၍ ရယူရာတွင် သင်၏ပေါ့လျော့မှု တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်း ကောင်း၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များနှင့် ငွေကြေးအပါအ၀င် အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ် လာပါက (သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုရယူရန် မတတ်သာပါက Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု၊ MPT နှင့် ၄င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်တို့ထံတွင် တစ်စုံတစ်ရာ တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု ရန်အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသေးစိတ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုတွင် အဖွဲ့ဝင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် တောင်းခံသည့် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို သင့်အနေဖြင့် လတ်တလောဖြစ်သော၊ တိကျမှန်ကန်သော၊ ပြည့်စုံမှုရှိသော အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ သင့်အား ၀န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏တောင်းဆိုမှုများကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပေးရန်၊ ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ဆောင်ရန်ကိစ္စများရှိလာသည့်အခါ အသုံးပြုရန်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်၊ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားဖြစ်ပေါ်လာသောကိစ္စအ၀၀ကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ဤ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးပို့ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဤ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန် မှတ်ပုံတင်စဉ်က ဖြည့်သွင်းခဲ့သော သင်၏အချက်အလက်များကို Byoh Lifestyle မှ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်း၊ အများသိအောင် ကြေညာခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရန် သင့်အနေဖြင့် သဘောတူလက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုတွင် သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်လိုက်ခြင်းသည် ဤ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများအားလုံးကို သင်၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းထံသို့ SMS စာတိုများနှင့် SMS Link များ ပေးပို့မည်ကို သိရှိလက်ခံသဘောတူရာရောက်သည်။
Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်ကြေး ၉၉ ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ကြေး ၉၉ ကျပ်ပေးဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Byoh Lifestyle က နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်သလို ဆောင်းပါးကောင်းများတွေကိုလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုးအခ ကောက်ခံသည့် အကြိမ်ရေမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် နေ့စဉ် ကောက်ခံမှုရှိသည့် ၃၆၅ ရက် ပက်ကေ့ခ်ျ ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုအမျိုးအစား ဝန်ဆောင်မှု၏ တရားဝင်မှု ကာလမှာ ၃၆၅ ရက်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်လျှင်အဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ငွေကောက် ခံခြင်းမရှိပါက လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ထိုနေ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လက်ကျန်ငွေလုံလောက်သည့်အချိန်မှသာ အဖိုးအခကောက်ခံခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအား ဆက်လက်လုပ် ဆောင်ပါမည်။
နောက်ကြောင်းပြန်၍ ငွေကောက်ခံခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ငွေကောက်ခံ ခြင်းမရှိလျှင် ထိုနေ့များအတွက် လူကြီးမင်းထံမှ အဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုကို အတည်ပြုပြီး လူကြီးမင်းကို ငွေကောက်ခံသည့် နေ့မှစ၍ လူကြီး မင်းကို တစ်ဆက်တည်း ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွက် ငွေကောက်ခံထားခြင်း မရှိပါက စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု အလိုလျောက် ရပ်စဲမည်ဖြစ်သည်။
ဤ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ၀န်ဆောင်ခကို ဖုန်းဘေလ် ကြိုတင်ဖြည့်ပြီးဖြစ်ပါက ဖုန်းငွေလက်ကျန်မှ ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပြီး သုံးပြီးမှ ငွေချေသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက ဖုန်းဘေလ်ကောက်ခံသည့်အခါ MPT မှ ကျသင့်ငွေကို တွက်ချက်ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဤ၀န်ဆောင်ခများသည် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များကြည့်ရှုခွင့်နှင့် ဆောင်းပါးများဖတ်ရှုခွင့်အတွက်အတွက် သက်သက် ကျသင့်ငွေဖြစ်ပြီး အင်တာနက်မှ တဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုခြင်းများအတွက် အင်တာနက်ဒေတာဖိုး ထပ်မံကျသင့်မည် ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်း၏ အကြောင်းအရာအား ရှာဖွေမှုပြုခြင်းနှင့် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဒေတာအဖိုးအခ ကျသင့်ပါမည်။ ကောက်ခံမှုအားလုံးတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်မည်ကို သတိပြုပါ။
ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်းအပါအဝင် ၎င်းချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားဘဲ လူကြီးမင်း၏မိုဘိုင်း အင်တာနက် ကို မျှဝေသုံးစွဲသည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်အတွက် လူကြီးမင်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များသည် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ စည်းကမ်းချက် များအရ ဝန်ဆောင်မှု အလိုအလျောက် ရပ်စဲခြင်း အချိန်ထိ တရားဝင် တည်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေသော ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ အသံဖိုင်များကို နားထောင်ခြင်းများအတွက် ၀န်ဆောင်ခကို Byoh Lifestyle App တွင် အဖွဲ့ဝင်စဉ်က မှတ်ပုံတင်ခဲ့သော သင်၏ MPT ဖုန်းနံပါတ်၏ ဖုန်းဘေလ်ထဲမှ ကောက်ခံရန်ကို သင့်အနေဖြင့် သဘောတူ လက်ခံသည် ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သော အခွန်အခများကိုလည်း သင့်အနေဖြင့် ပေးဆောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုအတွက် နေ့စဉ်ကြေး ၉၉ ကျပ်ကို အဖွဲ့ဝင်ဖြစ် သည့်နေ့မှစတင်၍ နေ့စဉ် အလိုအလျောက်သက်တမ်း တိုးကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်သည်။ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်ခ နှုန်းထားများကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း မရှိဘဲ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါက သင့်ထံသို့ SMS မှတဆင့် အကြောင်းကြားစာပေးပို့သွားမည် ဖြစ်သည်။ Byoh Lifestyle အနေဖြင့် မည်သည့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့်နှင့်မျှ ကောက်ခံပြီးသား ၀န်ဆောင်ခများကို ပြန်လည်ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မပယ်ဖျက်မခြင်း (သို့မဟုတ်) Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ သင့်အား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ မပယ်မဖျက်မခြင်း ၀န်ဆောင်ခကောက်ခံမှုဟာ အကျုံးဝင်နေမည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်မဟုတ်သော တစ်စုံတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက သင်သိ သည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ သင်၏ ဖုန်းကိုယူသုံး၍သော်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) သင်၏အမည်ပေါက် Sim Card ကို ယူသုံး၍သော်လည်းကောင်း၊ သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များဖြင့် စာရင်းဝင်ထားသည့် Sim Card ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဤ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုမှုအတွက် ၀န်ဆောင်ခကျသင့် ငွေအားလုံးကို သင်၏ဖုန်းဘေလ်ထဲမှ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်သည်။
၀န်ဆောင်ခ နေ့စဉ်ကြေး ၉၉ ကျပ်ကို အပြည့်အ၀ပေးသွင်းပြီးမှသာ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်မှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဖတ်ရှုခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းများအတွက် သီးသန့်သက်သက်သာ သင့်အနေဖြင့် ဤ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်ကို သဘောတူလက်ခံပါသည်။
Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုထဲမှ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များ၊ ဆောင်းပါးများနှင့် အသံထုတ်လွှင့်မှုများကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပြန်လည်ကူးယူခြင်း၊ ရိုက်ကူးခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ မိတ္တူရယူခြင်း၊ အခြားသူများ ထံပေးပို့ခြင်း၊ တဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချခြင်း၊ အတုအပဖန်တီးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းများ၊ ပြသခြင်း၊ တင် ဆက်ခြင်း၊ ပုံတူကူးယူ ဖန်တီးခြင်း၊ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသော စက်ပစ္စည်းကိရိယာများထဲတွင် ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထား ခြင်း၊ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသော နည်းလမ်းများဖြင့် အခြားသူများထံမျှဝေခြင်းများ မပြုလုပ်ပါဟု သဘောတူပါ သည်။ Byoh Lifestyle App ထဲမှ အကြောင်းအရာများ၊ အချက်အလက်များကို Byoh Lifestyle မှ ကြိုတင်စမ်းသပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်ကို သိရှိသဘောတူပါသည်။ ဤ၀န်ဆောင်မှုမှတဆင့် ရရှိနိုင်သည့် အကြောင်းအရာမှန်သမျှကို ကြိုတင်စမ်းသပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပယ်ချခြင်း၊ ကြည့်ရှုခွင့် ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန် Byoh Lifestyle တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ကာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၅။ ၀န်ဆောင်မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း
သင့်အနေဖြင့် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်အသုံးမပြုလိုပါက 8637 ကို OFF ဟု ပေးပို့၍ဖြစ်စေ၊ Byoh Lifestyle Application (သို့မဟုတ်) Byoh Lifestyle Website ထဲမှတဆင့်ဖြစ်စေ ၀န်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဤ၀န်ဆောင်မှုကို သင့်အနေဖြင့် အသုံးပြုနေ ခြင်းအား ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ၀န်ဆောင်ခတောင်းခံခြင်းနှင့်ပတ်သက် ၍ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း (သို့) ရပ်တန့်ခြင်းတို့ကို လည်းကောင်း ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း မရှိဘဲ Byoh Lifestyle တစ်ဦးတည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အတွက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်မျှ Byoh Lifestyle တွင် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ကြောင်းကို သင့်အနေဖြင့် သိရှိသဘောတူ လက်ခံပါသည်။
အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်တို့မှတစ်ဆင့် ဤ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သင်၏စက်ပစ္စည်းများမှ ဤ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်တစ်ဦးတည်းတွင် တာဝန်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤ၀န်ဆောင်မှုကိုရယူထားသော်လည်း သင်၏ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် လည်းကောင်း၊ သင်၏ စက်ပစ္စည်းများသည် ဤ၀န်ဆောင်မှုမှချမှတ်ထားသော အနိမ့်ဆုံး လိုအပ်ချက်များဖြင့် မကိုက်ညီ၍သော် လည်းကောင်း Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုနိုင်သော်လည်း သင်သည် ဤ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူထားပါက ကျသင့်သည့်ဝန်ဆောင်ခများကိုမူ ပေးချေရမည် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သင့်အနေဖြင့် သင်၏ စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများသည် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိကို သေချာစစ်ဆေးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ချို့ယွင်းမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဤ၀န်ဆောင်မှုမှ သတ်မှတ် ထားသည့် အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များကို သင်၏စက်ပစ္စည်းများက မထောက်ပံ့နိုင်သောကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဤ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းအတွက် Byoh Lifestyle တွင် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်သည့်အခါ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များ၏ အရည်အသွေးသည် သင်အသုံးပြုနေသော စက်၊ နေရာနှင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်းတို့ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် Byoh Lifestyle မှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသော အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များအတိုင်း စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ရယူထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ ချမှတ်ထားသော အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် များနှင့်မကိုက်ညီသော စက်ပစ္စည်းများ၊ Software များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုများနှင့် ပြည့်စုံမှုမရှိသော ၀န်ဆောင်မှုများအားလုံး အတွက် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်၏ Byoh Lifestyle အကောင့်ထံသို့ အကြောင်းကြား ချက်များပေးပို့ခြင်း၊ Byoh Lifestyle အကောင့်ဖွင့်စဉ်က စာရင်းပေးသွင်းထားသော ဖုန်းနံပါတ်ထံသို့ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ကို သဘောတူလက်ခံပါသည်။ Byoh Lifestyle အနေဖြင့် အကြောင်းအရာအသစ်များ၊ အစီအစဉ်အသစ်များ၊ ဗီဒီယိုအသစ်များ၊ ဆောင်းပါးအသစ်များ၊ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များ၊ သုံးစွဲသူများထံမှ စစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်းများ စသည်တို့ကို App ထဲမှ အသိပေးချက်များမှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ SMS ကတဆင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသော ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းများမှတဆင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပေးပို့သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါအပြင် Byoh Lifestyle App ထဲမှာ ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုအတွက် သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုကိစ္စများ၊ သဘောတူညီမှုများ၊ ထုတ်ဖော်ချက်များနဲ့ အခြားအချက် အလက်များပေးပို့ခြင်းကိုလည်း လက်ခံပါမည်။ ဤ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူထားသော သင့်ထံသို့ Byoh Lifestyle App မှတဆင့် အချက်အလက်များ၊ အကြောင်းအရာများ၊ စာသားများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲများ၊ အသံများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဒီဇိုင်းပုံရိပ်များ၊ ဗီဒီယိုများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ တွဲဖက်အကြောင်းအရာများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများကို Byoh Lifestyle မှ ပေးပို့ခွင့်ရှိသည်။ မှတ်ပုံတင်စဉ်က သင်ပေးသွင်းသော အချက်အလက်များနှင့် ထိုသို့ပေးသွင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ် လာသော အကျိုးဆက်များအတွက် သင့်တွင်သာ အလုံးစုံ တာဝန်ရှိသည်။
Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို သင့်အနေဖြင့် စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။ ဤ၀န်ဆောင်မှုသည် သင်၏ တစ်ကိုယ်ရည်နှင့် အကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်သော အသုံးပြုမှုအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် Byoh Lifestyle App ထဲမှ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များ၊ ဆောင်းပါးများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ အသံဖိုင်များ၊ ပုံများကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပြန်လည်ကူး ယူခြင်း၊ ရိုက်ကူးခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ မိတ္တူရယူခြင်း၊ မူပိုင်ခွင့်တင်ခြင်း၊ အခြားသူများထံပေးပို့ခြင်း၊ တဆင့် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း၊ အတုအပဖန်တီးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းများ၊ ပြသခြင်း၊ တင်ဆက်ခြင်း၊ ပုံတူကူးယူဖန်တီးခြင်း၊ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသော စက်ပစ္စည်းကိရိယာများထဲတွင် ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားခြင်း၊ ခွင့်ပြု ထားခြင်းမရှိသောနည်းလမ်းများဖြင့် အခြားသူများထံမျှဝေခြင်းကို လုံးဝ မပြုလုပ်ရပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါက တည်ဆဲဥပဒေများအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု၏ဆုံးရှုံးမှု၊ နစ်နာမှုအလုံးစုံအတွက် သင့်ဘက်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုထဲရှိ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်များ၊ ဆောင်းပါးများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ အသံဖိုင်များ၊ ပုံများကို Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု၏ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း တရားဥပဒေနှင့်အညီသာ ရယူသုံးစွဲကြည့်ရှုဟု သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုအား ရယူရာတွင် (၁) Byoh Lifestyle မှ စီစဉ်ပေးထားသော ကြားခံစနစ် မဟုတ်သည့် အခြားနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ (၂) ၀န်ဆောင်မှုများရယူရာတွင် Robot၊ Spider၊ Scraper၊ Script၊ Web Crawler များအသုံးပြု၍ နှောင့်ယှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အခြားအလိုအလျောက် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ (၃) ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်း၏ ဇာတ်မြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် Identifier ကုဒ်နံပါတ်များကို အတုအပပြုလုပ်ခြင်း၊ အချက်အလက်များကို လိုသလိုပြုပြင်ခြင်း (၄) Byoh Lifestyle ဆာဗာအား ပျက်ဆီးစေမည့်လုပ်ရပ်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ အသုံးပြုခြင်း (၅) နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသော ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် စာများ၊ အီးမေးလ်များရေးသားခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပါသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ အသုံးပြုခြင်းများကို လုံးဝ မပြုလုပ်ပါဟု သဘောတူပါသည်။
သင်သည် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ သတ်မှတ်ပေးထားသော စည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များဘောင်အတွင်းကသာ အသုံးပြုရမည် ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကသတ်မှတ်ပေးထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်၍သော်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များ ကို မလိုက်နာဘဲ ကျော်လွန်၍သော်လည်းကောင်း Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်း၊ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု၏ Social Media စာမျက်နှာများဖြစ်သည့် Facebook ၊ Instagram ၊ YouTube နှင့် Web Page များကို Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ သက်ဆိုင်ရာ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ရယူသုံးစွဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါဟု သဘောတူပါသည်။
၉။ အသိဥာဏ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့် (Intellectually Property Rights)
Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုတွင် အသုံးပြုထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ (Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုအမည်နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအပါအ၀င်)၊ လုပ်ငန်းအမည်များ၊ လိုဂိုများ၊ ၀န်ဆောင်မှု အမှတ်အသားများ အားလုံးသည် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ယင်း၏လုပ်ငန်းဖော်ကုမ္ပဏီများ၊ အခြားသက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဤ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင့်ကိုပေးသောအခွင့်အရေးသည် ထိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ လုပ်ငန်းအမည်များ၊ လိုဂိုများ၊ ၀န်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများကို သုံးစွဲပိုင်ခွင့်များ ရပိုင်ခွင့်များ ပေးအပ်ခြင်း မပါဝင်ပါ။ ထိုအခွင့်အရေးများကို Byoh ၀န်ဆောင်မှု၏လုပ်ငန်းဖော်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ပေးမှသာ သုံးစွဲပိုင်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနာမည်များကို အသုံးပြုပြီး Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို ရည်ညွှန်းခြင်း၊ အခြားတစ်ခုခုကို ရည်ညွန်းခြင်းများ ဆောင် ရွက်ခွင့်မရှိပါ။
မည်သည့်အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ချိုးဖောက်ခြင်း ကြောင့် (သို့မဟုတ်) စာချုပ်အရဖြစ်စေ၊ တရားမနစ်နာမှုအရဖြစ်စေ၊ ယတိပြတ်တာဝန်ရှိမှုကြောင့် ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) ဤ ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်၊ နစ်နာကြေး၊ တောင်းဆိုချက်၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၊ တရားစွဲ ဆိုခြင်း၊ ဥပဒေအဆုံးအဖြတ်၊ ဆုံးရှုံးမှုနှင့်တာဝန်ရှိမှုများ (သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုမှတဆင့် ရရှိသော အချက်အလက်များ၊ အကြောင်းအရာများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ၀န်ဆောင်မှုများကြောင့် သင်နှင့်အခြား အဖွဲ့အစည်းများအတွက် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း၊ ကြီးမားပြင်းထန်သော၊ အသေးအဖွဲဖြစ်သော၊ (သို့မဟုတ်) အကျိုးဆက်အရ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကြောင်းကိစ္စများ၊ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ၊ နစ်နာကြေးတောင်းခံမှုများ၊ အရေးယူမှုများ၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ တရားရင်ဆိုင်မှုများ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်စွဲဆိုချက်များ၊ စီရင်ချက်များ၊ ကုန်ကျစရိတ်များအမျိုးမျိုးသည် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု ၊ MPT နှင့် ၄င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများ၊ မူပိုင် ခွင့်ပေးအပ်သူများတွင် ဥပဒေအရ တာဝန်မရှိစေရပါ။ သင့်အနေဖြင့်သာ ကိစ္စအ၀၀တို့အတွက် တာဝန်ယူဖြေရှင်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသဘောတူပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် တရားဝင်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးပြုသည့် အချိန်မှစ၍ အသုံးပြုသူများစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို သိရှိသဘောတူ လက်ခံပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူသည့်အတွက် ထိုစည်းမျည်းစည်းကမ်းများကို မဖတ်ရှုဘဲ ဤ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုခြင်းသည် သင်တစ်ဦးတည်း၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။
၁၂။ ဥပဒေသက်ရောက်မှုနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ၏တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုမှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာ သော အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာ၊ ပြဿနာတစ်ခုခု ပေါ်ပေါက်လာပါက မြန်မာနိုင်ငံတော်တရားရုံးများတွင် တည်ဆဲ ဥပဒေများအရ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သင့်အနေဖြင့် သဘောတူလက်ခံပါသည်။
“ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်
လူငယ်လူရွယ်တို့ အောင်မြင် တိုးတက်စေဖို့၊ ကျန်းမာထက်မြက်စေဖို့၊ ဖက်ရှင်ကျလှပစေဖို့၊ တက်ကြွ ပျော်ရွှင် စေဖို့၊ ဗဟုသုတတွေ ကြွယ်ဝစေဖို့၊ ခေတ်နဲ့အညီ ရင်ပေါင်တန်း နိုင်ဖို့၊ လူနေမှုဘ၀တွေ မြင့်တက်စေဖို့၊ နည်းပညာ ခေတ်ကြီးထဲမှာ သူများတွေရဲ့နောက်မှာ မကျန်ရစ်စေဖို့ အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးတဲ့ “ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ” အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ရင်း ငွေကျပ် တစ်သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များ ရယူလိုက်ပါ။ “ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို ၂၇.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၅.၁၂.၂၀၁၉ ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းမဲကာလအတွင်း MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူထားပြီး “ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါ တယ်။
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လိုပါက …
အဆင့် (၁) – 8637 သို့ ON ဟု SMS ပို့ပါ။
အဆင့် (၂) – 8637 သို့9ဟု SMS ထပ်မံ ပို့ပါ။
www.byoh.com.mm website မှ နေလည်း ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူပြီး ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
• ငွေကျပ် တစ်သန်းတန် MPT ဖုန်းဘေလ် ၃ ဆု
• Samsung A30 ၆ လုံး
၂၃.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၅.၁၂.၂၀၁၉ ရက်အထိ
“ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် နဲ့ ငွေကျပ်တစ်သန်းတန် MPT ဖုန်းဘေလ် ကံထူးရှင် ၃ ဦး၊ Samsung A30 ကံထူးရှင် ခြောက်ဦး စုစုပေါင်း ကံထူးရှင် ၉ ဦးတို့ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ရက်တွင် ပထမအကြိမ် ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပပြီး ငွေကျပ်တစ်သန်း တန် MPT ဖုန်းဘေလ် ကံထူးရှင် တစ် ဦး နဲ့ Samsung A30 ကံထူးရှင်တစ် ဦး တို့ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ရာတွင် ဆုမဲများအတွက် ကံထူးရှင်များ ကို အရံအနေနဲ့ ကံထူးရှင် နောက်ထပ် သုံးဦးကိုပါ မဲနှိုက်ရွေးချယ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ် ကံထူးရှင်များအား ကြေညာခြင်း
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ရက်တွင် ပထမအကြိမ် ဆုရရှိသူများအား MPT Facebook Page နှင့် Byoh Lifesytle Facebook Page တွင် ကြေညာပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယ အကြိမ် ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲ
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ရက်တွင် ပထမအကြိမ် ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပပြီး ငွေကျပ်တစ်သန်း တန် MPT ဖုန်းဘေလ် ကံထူးရှင် တစ် ဦး နဲ့ Samsung A30 ကံထူးရှင်တစ် ဦး တို့ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယ အကြိမ် ကံထူးရှင်များအား ကြေညာခြင်း
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ရက်တွင် ပထမအကြိမ် ဆုရရှိသူများအား MPT Facebook Page နှင့် Byoh Lifestyle Facebook Page တွင် ကြေညာပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၂.၁.၂၀၂၀ ရက်တွင် ပထမအကြိမ် ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပပြီး ငွေကျပ်တစ်သန်း တန် MPT ဖုန်းဘေလ် ကံထူးရှင် တစ် ဦး နဲ့ Samsung A30 ကံထူးရှင် တစ် ဦး တို့ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
တတိယအကြိမ် ကံထူးရှင်များအား ကြေညာခြင်း
၁၅.၁.၂၀၂၀ ရက်တွင် ပထမအကြိမ် ဆုရရှိသူများအား MPT Facebook Page နှင့် Byoh Lifestyle Facebook Page တွင် ကြေညာပေး သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဆုများ၏ ကံထူးရှင်တွေထံ သို့ ကံထူးရှင်များရွေးချယ်ပြီးနောက် အလုပ်လုပ်ရက် ၃ ရက်အတွင်း ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြား ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆု ကံထူးရှင်များ သည် သတ်မှတ်ထားသောရက်တွင် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု (eTrade Myanmar Co., Ltd) ရုံးချုပ်တွင် လာရောက်ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ MPT ဖုန်းနံပါတ်ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုသူများ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်သည်။
၂။ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု (eTrade Myanmar Co., Ltd.) နှင့် MPT မှ ၀န်ထမ်းများ၊ ၀န်ထမ်းများ၏ မိသားစုဝင်များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရှိပါ။
၃။ “ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လိုသူများအနေဖြင့် ကံစမ်းမဲကာလအတွင်း MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၄။ ကံစမ်းမဲကာလအတွင်း Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူထားသော သူများထဲမှ ကျပ်တစ်သန်း တန် MPT ဖုန်းဘေလ် ကံထူးရှင် ၃ ဦး နှင့် Samsung A30 ကံထူးရှင် ခြောက် ဦး မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်များ ချီးမြှင့်ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကံထူးရှင်များ အတွက် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ရာတွင် အရံကံထူးရှင်သုံးဦးကိုပါ မဲနှိုက်ရွေးချယ်ထားမည် ဖြစ်သည်။
၅။ ကံထူးရှင်များကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီးနောက် အလုပ်လုပ်ရက် ၃ ရက်အတွင်း ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ် အကြောင်း ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အလုပ်လုပ်ရက် သုံးရက်အတွင်း ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပါက အရံအဖြစ် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ထားသော အရံကံထူးရှင်များထံ အစဉ်လိုက်ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားကာ ဆက်သွယ်၍ရသူ ကို ငွေကျပ်တစ်သန်းတန် MPT ဖုန်းဘေကဒ် နှင့် Samsung A30 ကံထူးရှင် အဖြစ် အတည်ပြု သတ်မှတ်ပြီး ဆုချီးမြှင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ မူရင်းကံထူးရှင်များကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီးနောက် ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရာတွင် အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် အလုပ်လုပ်ရက် သုံးရက်အတွင်း ဆက်သွယ်၍ မရမှသာလျှင် အရံကံထူးရှင်များထံ အစဉ်လိုက် ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ကာ ဆက်သွယ်၍ရသူကို ကံထူးရှင် အဖြစ် အတည်ပြု သတ်မှတ်မည် ဖြစ်သည်။
၇။ ကံထူးရှင်များထံသို့ ကံထူးရှင်များရွေးချယ်ပြီးနောက် အလုပ်လုပ်ရက် ၃ ရက်အတွင်း ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်း ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် MPT Facebook Page နှင့် Byoh Lifestyle Facebook Page များမှာလည်း ကံထူးရှင်များကို Post တင်ကာ ကြေညာပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ကံထူးရှင်များအနေဖြင့် ငွေကျပ် ၁ သန်းတန် MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် နှင့် Samsung A30 များကို သတ်မှတ် ထားသော ဆုပေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်တွင် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု (eTrade Myanmar Co., Ltd) ရုံးချုပ်တွင် လာရောက်ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ ဆုများ လာရောက် ထုတ်ယူရာတွင် ကံထူးရှင်များ သည် ကံစမ်းမဲ ကာလ အတွင်း Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုကိုရယူထားသည့် MPT ဖုန်း Sim Card ကို ယူဆောင် လာရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား (သို့) သက်သေခံကတ်ပြားတစ်ခုခု ပြသရမည် ဖြစ်သည်။
၉။ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှုမှ ပြုလုပ် ကျင်းပသော “ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ” ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု (eTrade Myanmar Co., Ltd.) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာလျှင်အတည် ဖြစ်သည်။
၁၀။ ကံစမ်းမဲလက်ဆောင်များ (သို့) ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အရာမျှကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ တန်ဖိုးငွေပြန်အမ်းခြင်း၊ ငွေသား (သို့) အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
၁၁။ မူလသတ်မှတ်ထားသော ကံစမ်းမဲလက်ဆောင်များအစား ယင်းတို့နှင့် တူညီသောတန်ဖိုး (သို့) ပို၍တန်ဖိုးကြီးသောဆုလက်ဆောင်များကို Shal Game ၀န်ဆောင်မှု (eTrade Myanmar Co., Ltd.) အနေ ဖြင့် ကြိုတင်ကြေငြာခြင်းမရှိဘဲ အစားထိုးချီးမြှင့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၂။ ကံထူးရှင်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော ဆုလက်ဆောင်များ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ မိမိ သဘောအလျှောက် ဆုလက်ဆောင်များကိုပြန်လည်ရောင်းချရာမှဖြစ်ပေါ်သော အရှုံး၊ အမြတ်များ၊ ကုန်ကျ စရိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု (eTrade Myanmar Co., Ltd.) မှ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေး မည် မဟုတ်ပါ။
၁၃။ “ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ရယူထားသော လူကြီးမင်းတို့၏ဖုန်းနံပါတ်များကို Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု (eTrade Myanmar Co., Ltd.) မှ “ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ” အစီအစဉ်အတွက် သာ ရယူထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းတည်ဆဲဥပဒေများအရ လူကြီးမင်းတို့၏ ဖုန်းနံပါတ် များကို Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု (eTrade Myanmar Co., Ltd.) ၏ အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ Service Provider များအပါအ၀င် အခြားကြားခံကုမ္ပဏီများကို ပေးပို့ခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ ကန့်သတ်ချက် အနေဖြင့် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်နှင့် တိုက်ရိုက် ပတ်သက် ဆက်နွယ်နေသော အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ Service Provider များထံကိုမူ လိုအပ်လာပါက ပြိုင်ပွဲဝင်တို့၏ ဖုန်းနံပါတ် များ ပေးပို့မည် ဖြစ်ပါသည်။
“ဗျို့ မှာ ငွေကျပ် ၁သန်းတန် ဖုန်းဘေ နှင့် Samsung A30 များစွာရယူပါ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းသူများ အားလုံးသည် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် Byoh Lifestyle ၀န်ဆောင်မှု (eTrade Myanmar Co., Ltd.) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် များကို သဘောတူလက်ခံပြီး ဖြစ်သည်။
Terms and Conditions of Byoh Lifestyle